Martín Casariego. Kubvunzana nemunyori we Ini fodya kukanganwa kuti unonwa | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Hurukuro, Vanyori, Novela, Nhema nhema
Mufananidzo: Webhusaiti yaMartín Casariego
Martin Casariego, munyori Madrilenian kuwedzera kune munyori wechinyorwa (Chakavanzika chaPuente Viejo) uye articulist mune dzakasiyana nhepfenyuro, gore rakapera akaburitsa rake dema genre novel Ini ndinoputa kukanganwa kuti unonwa, rakabudiswa naSiruela. Asi inotova nenhoroondo yakareba yemazita anodarika makumi matatu, zvisere zvacho zvevana. Akandipa izvi indavhiyu kuti ndinokutendai zvikuru. Nezve mutsa wake uye nenguva yake, iyo yaanogovanawo nezvematongerwo enyika.
MARTÍN CASARIEGO - KUSVIRA
MARTIN CASARIEGO: Hazvigone rangarira bhuku rekutanga randakaverenga. Iko kune pikicha inoita kuti ndisekwe mandiri ndiri mudiki kwazvo, ndine kutarisa kwakanyanya uye mumaoko angu bhuku re Tintin kupidiguka. Saka inogona kuve rimwe remabhuku eTintin anga aneni hupenyu hwangu hwese. Nyaya yekutanga yandakanyora yaive isina mubvunzo Kudzokorora kuchikoro.
MC: Imwe yekutanga yakandirova, kupfuura kundivaraidza, yaive Orzowei, ivo Alberto manzi, nemakore gumi nematatu kana gumi nemana, ndinofunga. Sei? Nekuti, kuva neruzivo, yaive nehupamhi iyo vamwe vaishaya, uye yaive yakanyanya kunyorwa. Yakapihwa na Tarzan kuita kuti ndirote Africa. Nekuda kwekuda kuziva, ndakaiverenga zvakare pandakanga ndava nemakore makumi maviri, uyezve ndakaifarira; uye makore gumi gare gare, zvimwe chete.
MC: Handina kana munyori mumwe chete wandinodisisa, kune vakawanda, vese avo vakanyora novel inondinakidza, Graham Green, Kafka, Tolstoy, Clarín, Delibes, Albert Camus, Bioy Casares, James M. Kaini, Carson McCullers, nezvimwe, nezvimwe. Uye pasina kupokana, Cervantes.
MC: Panguva iyoyo ndaida chaizvo N'anga, ivo Rayuelaasi kushingairira kwangu kwakatonhora pamusoro pemakore. Ndinoda zvikuru Alexandra Vidal, ivo Nezve magamba nemakuva, asi ndaitoda kumuendesa kure. Pane kudaro, hongu ndinoda kusangana Anna Karenina. Uye uvasike? Kwavari uye zvimwe zvakawanda, hongu.
MC: Handifungi. Zvakanaka zvakanyanya silence kutenderedza uye zvishoma zvinokanganisa zvirinani.
MC: Iyo saiti haina basa kwandiri zvishoma, ini ndaifanira kuzvigadzirisa, ndinogona kunyora en kofi... Asi yakanaka, mumunda, ndega.
AL: Chii chatinowana munoverengeka yakoIni ndinoputa kukanganwa kuti unonwa?
MC: Mumwe vakaroorana protagonista kuti ndinoda zvakawanda, Max naElsa, munhu akaipa wandinodawo, kunyange ndisina kuva naye, García, nyaya yerudo, chiito, kumwe kunyengera, hurukuro dzekukurumidza, zvine kuseka uye kusanzwisisa, mareferensi etsika, a San Sebastián chepfu neETA uye a Madrid kusiya iyo Fambisa...
AL: Zvimwe zvinyorwa zvemhando zvinokufadza?
MC: Ini handisi murume kana mukadziKunyangwe paive nenguva apo pandakaverenga mhosva zhinji uye matsotsi enhau (uye ndipo panobva nhevedzano yaMax Lomas) Ndinofunga Tham enganonyorwa dzakanaka ivo vari pamusoro pemhando.
MC: Iye zvino ndiri kugadzirisa Mutengo wangu hapana, kuenderera kwe Ini ndinoputa kukanganwa kuti unonwa uye kuti Siruela achaburitsa gore rinouya. Ini ndakanyatsoiburitsa pakutanga, muna 1996, asi zvichiteerana zvichienda kumberi I fodya…, uye ndakafunga kuti ndaida kudzokorora.
Kana zvakadaro kuverenga, yekupedzisira yave Mukomana ane bhegi pamusoro wake, ivo Alexis anofara, iyo yandaida zvakanyanya, uye ndine mabhuku mashoma patafura, yakandimirira, Rwendo kuCongo, naGidheoni, uye Reunion y Mweya wakashingarakanyorwa naFred Uhlman.
MC: Zvagara zvichinetsa kutsikisa, ikozvino uye pamberi. Zvakawanda zvakanyorwa, uye kunyangwe zvakawanda zvakaburitswa, chinongova chikamu chidiki pane izvo izvo vaparidzi vanogamuchira. Chero zvazvingaitika, kana mumwe munhu achinyatsoda kunyora uye achida kutsikisa, vanofanirwa kushingirira, kwete kukundwa, kuzvitemba ... izvo zvisiri nyore nguva dzose.
AL: Ndeipi nguva yedambudziko ratiri kusangana naro tichitora kubva pane yekusika yekuona? Iwe unogona here kuchengeta chimwe chinhu chakanakira kana chinobatsira kune enguva yemberi enganonyorwa?
MC: Zvese izvo munhu zvinorarama, zvakanaka nezvakaipa, zvinoshandiswa kunyora. Muchokwadi, iwe unonyora kubva pakuverenga kwako uye zviitiko zvako. Dzimwe nguva hukama ihwohwo hunokurumidza, asi kazhinji unofanira kurega zvinhu zororo zvishoma. Izvozvi, semuenzaniso, ini handidi kuda kuverenga chero chinhu nezve denda, kana kunyora. Asi, nedaro refu, zvichaonekwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Martín Casariego. Kubvunzana nemunyori we Ini fodya kukanganwa kuti unonwa
Mabhuku gumi nemaviri akanak